Miverina ny tsaho, ny iPhone 13 dia hanana sehatra famahanana tsy misy tariby lehibe kokoa miaraka amin'ny famerenana amin'ny laoniny | Vaovao IPhone
Miverina ny tsaho, iPhone 13 dia hanana sehatra famahanana tsy misy tariby lehibe kokoa miaraka amin'ny famerenana amin'ny laoniny
Eo antenatenan'ny fahavaratra isika ary efa fantatrareo fa fotoana tokony hampielezana tsaho sy hahitana zavatra ao amin'ny kinova beta amin'ireo rafitra fiasa samihafa ho an'ny fitaovana Apple. Ny volana septambra no volana ahitantsika ireo kinova farany, ary ahitantsika izay ho toetran'ny iPhone 13 manaraka ary angamba fitaovana hafa. Ary tsy mahagaga, ankehitriny ny mety misy ny iPhone 13 manaraka dia manana tontolon'ny famandrihana tsy misy tariby vaovao miaraka amin'ny mety famerenana amin'ny laoniny. Vakio hatrany fa omenay anao ny pitsopitsony rehetra.
Araka ny tsiliantsofina farany, Apple dia hieritreritra Ataovy lehibe kokoa ny Coil Wireless Charging Coil amin'ny iPhone 13 manaraka, ity dia hampiakatra be ny faritra amboniny izay ahafahana miditra amin'ny Internet. Izany rehetra izany dia nolazain'i Max Weinbach tamin'ny alàlan'ny EveryApplePro, tamin'ity fitaovana ity dia manamafy fa io fitomboan'ny coil enta-mavesatra io azo ampiasaina amin'ny famandrihana Wireless Wireless vaovao, zavatra izay hamela ny mpampiasa hampiakatra ny fitaovana fampandehanana tsy misy tariby toy ny AirPods, mametraka azy ireo ao ambadiky ny iPhone. Zavatra nolavin'ny "sakaizantsika" tamin'ny tranga taloha Nilaza i Gurman fa ny fahatongavan'ireo finday tsy mandeha amin'ny laoniny miverina amin'ny iPhone dia tsy azo inoana amin'ny "ho avy tsy ho ela".
Raha fintinina, tsaho taloha izay miverina foana, fa ny tena marina dia tatitra maromaro no milaza fa ny iPhone 12 dia efa mahay mamita fitaovana amin'ny alàlan'ny famerenam-bola tsy misy tariby, na dia fantatrao aza fa tsy manana an'io safidy io izahay satria tsy nampandeha azy i Apple, ary mety tsy hiafara amin'ny fanaovana azy io. ny Ny fanovana ao anaty coil tsy misy tariby tsy misy tariby satria nantitranteriny fa mety ho izay no mitarika an'i Apple hanambara ny famerenana amin'ny laoniny Wireless vaovao. Mazava ho azy, tadidio fa ity famandrihana tsy misy tariby ity efa azo alaina amin'ny fitaovana finday hafa, toa an'i Samsung, ary miahiahy aho fa zavatra ampiasain'ny mpampiasa rehetra izany. Ary ahoana ny hevitrao momba ity mety famerenam-bola tsy misy tariby ity? Mihevitra ve ianao fa hampiasa azy io?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fantson'ny IPhone » iPhone 13 » Miverina ny tsaho, iPhone 13 dia hanana sehatra famahanana tsy misy tariby lehibe kokoa miaraka amin'ny famerenana amin'ny laoniny